आपूर्तिमन्त्रीको आश्वासन : ग्यास चामलको चिन्ता नगर्नोस्, जिम्मा मेरो हो ! - મોજીલું ગુજરાત
आपूर्तिमन्त्रीको आश्वासन : ग्यास चामलको चिन्ता नगर्नोस्, जिम्मा मेरो हो !
काठमाडौं । कोरोनाको त्रास बढेसँगै बजारमा ग्यास, चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन्छ भन्ने हल्लाका पछि नलाग्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले जनतामा आग्रह गरेका छन् । अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भट्टले मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै किसिमको समस्या नरहेको र नरहने बताए । अति आवश्यक वस्तुको सबैखाले आपूर्ति व्यवस्था सहज रहेको र बजारमा पर्याप्त मौज्दात भएकाले अभावको मनोवैज्ञानिक त्रास नपाल्न उनले आग्रह गरे ।
मन्त्री भट्टले भने, ‘जनतालाई मेरो आग्रह छ, आपूर्ति व्यवस्था ठीक छ कुनै पनि वस्तुको अभाव हुँदैन, यो मेरो प्रतिवद्धता हो ।’ कालोबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्न मन्त्रालयले विशेष टास्कफोर्स बनाउने तयारी गरिरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले कुनै वस्तुको अभाव देखिएमा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने बताए । मन्त्री भट्टसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः– कोरोनाको त्रासले नेपालको आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको हो ? कतिपय वस्तुको अभाव देखिन थालेको छ…
कोरोना विश्वव्यापी र ठूलो समस्या हो । तर, हामी यसको संक्रमणमा अहिले छैनौं । त्यसैले, तत्कालै नेपालको बजारमा यसको असर देखिनुपर्ने कुनै कारण नभएको सरकारकोे ठम्याइ छ । बजारमा विभिन्न वस्तुहरु हराएको भन्ने रिपोर्टहरु प्राप्त भएका छन् । तर, यो आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएर नभई जनतामा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासले हो । यो गम्भीर छ । किनभने, जनता त्रसित हुनुपर्ने कारण केही छैन । जनताको दैनिकी बिग्रिने गरी नेपालको आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएको होइन । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन ।
तर, ग्यास चामलजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुने हो कि भनेर जनतामा त्रास त देखिइसकेको छ नि ? कोरोनाविरुद्ध लड्न उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले समग्र विषयको नेतृत्व लिएको छ । त्यसमा म पनि छु । आज पनि उक्त समितिको बैठक बसेको थियो । समितिले देशमा देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको असरको पाटोमा क्षेत्रगत पूर्वतयारी गर्छ ।
स्वास्थ्य, गृह, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, कृषिलगायतका मन्त्रालयहरुले आफ्नो क्षेत्रमा निभाउनुपर्ने भूमिका र तहगत ढंगबाट कामको वर्गीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । व्यक्तिगतरुपमा म र मेरो मन्त्रालय तथा समग्र सरकार जनतासँगको समस्यामा साथै छौं । बुँदागतरुपमा भन्नुपर्‍यो भने आपूर्ति मन्त्रालयले चाहिँ के के गर्दैछ ?
बजारको त्रसित अवस्थाबारे हामीलाई भएको रिर्पोटिङका आधारमा सबै महाशाखा, विभाग, कम्पनी र निगमहरुलाई चुस्त रहन निर्देशन भएको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज र सरल बनाउन तथा अभावको अवस्था आउँछ भन्ने त्रास पालेर सञ्चय नगर्न जनतालाई सुसूचित पार्न मैले निर्देशन गरेको छु । सबै साथीहरु खटिनुभएको छ । समग्र विषयमा छलफल गर्न आज पनि मन्त्रालयमा बृहत बैठक भएको छ ।
माक्स लगायत अति आवश्यक हुने वस्तुहरु विदेशतिर निर्यात हुन थाल्यो भन्ने चर्चा छ । मन्त्रालयले यसबारे के गर्दैछ ? मन्त्रालयले अहिले अति आवश्यक वस्तुहरुको सूची बनाउँदैछ । यसमा आयात हुने मुलुकबाट हामीलाई प्राप्त हुने वस्तुहरु के के हुन् र हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरु के–के हुन भन्ने अध्ययन हुन्छ । मुलुकका लागि अति आवश्यक वस्तु छन् भने तिनको निर्यात रोक्ने तयारी गरेका छौं । त्यसैगरी अतिआवश्यक वस्तुहरु आयात हुने मुलुकमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नका लागि कूटनीतिक एवं मन्त्रालयगत तहबाट वार्ता र छलफल थालिसकेका छौं ।
बजारको कृत्रिम अभाव रोक्न मन्त्रालयले के गर्दैछ ? मैले सुनेको छु, मानिसहरु ग्यास, चामलजस्ता वस्तुहरुको अनावश्यक भण्डारणतर्फ लागेका छन् । यो आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिएर नभई मनौवैज्ञानिक त्रासले गर्दा भएको हो । जनतालाई मेरो फेरि पनि आग्रह छ– मनोवैज्ञानिक त्रास त्याग्नुस् ।प्रथमतः बजारमा हुने कुनै पनि अभाव चिर्न नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत हामी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्छौं । हाम्रो तयारी सुरु भइसकेको छ । बजारमा जुन वस्तुको अभाव हुन्छ, त्यसैमा सरकारका कम्पनीले हस्तक्षेप गर्ने गरी दायरा बढाउन निर्देशन भएको छ ।
एक हप्तामा मास्क थप उत्पादन हुने
विवाहित पुरुषसँग मायाप्रेम नगर्नु भन्दै यी चर्चित अभिनेत्रीले सुनाइन आफ्नो पिडा